Madaxwaynaha Maamulka Hirshabeele oo Xilkii ka qaaday Gudoomiyaha Beledwayne iyo ku xigeenkiisa.
Sidoo kale Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa xilka ka qaaday guddoomiye ku xigeenka degmada Matabaan Sheekh doon Faarax Waare.
Madaxweynaha Hirshabeelle oo haatan ku sugan magaalada Beledweyne ayaa waxaa uu u magacaabay guddoomiyaha degmada Beledweyne Maxamed Axmed Ibraahim( Food cadde) halka uu Guddoomiye ku xigeenka degmada Baladweyne loo magaacabay Khadar Xasan Afrax,Guddoomiye ku xigeenka degmada Matabaan ayaa loo magacabay Ducaale Aadan Cabdi.
Waa markii labaad ee uu xilka ka qaadis ku sameeyay Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cosoble xubno ka tirsanmaamulka gobolka Hiiraan, waxana uu hore xilka qaadis ugu sameeyay guddoomiyihii hore Yuusuf Axmed Hagar(Dabageed) isagoo ku bedelay Cali Jeyte Cismaan.
« Musharaxiin Ka Tanasulaya Tartanka Madaxwaynaha Dalka+XOG.
Maamulka Galmudug oo Maanta soo bandhigaya Ruux lagu qabtay Walxaha qarxa. »